Iimpawu, iipropathi kunye nokusetyenziswa kwe-algae ebomvu | Ngeentlanzi
Ubulembu, sonke sikubonile ubulembu elwandle, elwandle, imilambo, amachibi, njl. Ehlabathini kukho iintlobo ezintathu eziphambili ze-algae: eluhlaza, emdaka kunye nobomvu. Namhlanje siza kuthetha ulwelwe obomvu. BangabakwaPhylum Rhodophyta kwaye baliqela elibalulekileyo le-algae elibandakanya malunga ne-7.000 yeentlobo. Babonakala ngokuba nombala obomvu ngokungabinayo i-flagella. Oku kukunika amandla amancinci okuhamba.
Kule posi siza kuthetha ngobomvu obomvu ngokunzulu. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, kufuneka uqhubeke ngokufunda 🙂
2 Ukutya okubomvu kwealgae
3 Ubume bendalo kunye nezoqoqosho ngokubaluleka kwe-algae ebomvu
4 Iimpawu zealgae
4.1 Iziphumo ezichaseneyo ne-antioxidant, iodine kunye noxinzelelo lwegazi
4.2 Iziphumo zekhalsiyam kunye nevithamin K
Ubulembu bunjalo Izinto eziphilayo ze-photosynthetic ezikwaziyo ukufunxa ilanga kunye nokuziguqula zibe ngamandla. Umbala obomvu ngenxa yeerhodoplast. Ezi organelles ziqulathe i-chlorophyll A. Ikwanazo nezinye ii-pigment ezinje nge-phycoerythrin kunye ne-phycocyanin. Ezi zombala zinoxanduva lokugquma iklorofili ukunika esi sityalo umbala obomvu obonakalayo.
Zizinto ezingenako ukuzihlanganisa. Njengoko bengenalo naluphi na uhlobo lwesibetho, abanakuhamba kuwo wonke umjikelo wobomi. Kananjalo abanazo ii-centrosomes kunye nolunye uhlobo lombutho zii-microtubules.
Ezi algae zihlala zikhusela ii-colloids njenge-agar-agar kunye ne-carrageenan. Ezi zinto zisetyenziswa kakhulu ekusetyenzisweni kwamayeza nasekutyeni. Ngesi sizathu, i-algae ebomvu ibaluleke kakhulu kwizityalo zaselwandle ebantwini.
Ezinye zazo zifumaneka kumanzi amatsha, nangona ngokubanzi zonke ziselwandle. Bahlala bekhula kwiitropiki nakwindawo eziphantsi kwetropiki ezingaphantsi komgca wamanzi.
Ukutya okubomvu kwealgae
I-algae ebomvu ayifuni kuphela ukukhanya kwelanga kwi-photosynthesize kwaye ke iyaqhubeka. Bafuna indawo enomswakama. Bathatha iikhompawundi ezingaphiliyo eziphuma emhlabeni zasemanzini, kunye neoksijini kunye nelanga, iguqula iglucose kunye ne-carbonyl sulfide.
Okwangoku, enkosi kwizifundo ezenziwa nge-algae, kuye kwafumaniseka ukuba banokondla iintsholongwane ezithile ezihlala kumhlaba ongaphantsi kwamanzi. Oku kuyakwenza i-algae ebomvu ingangqinelani ngqo ne-autotrophic, kodwa iya kuthanda i-heterotrophism.
Ubume bendalo kunye nezoqoqosho ngokubaluleka kwe-algae ebomvu
Ukulinganisela kwendalo kwindalo yaselwandle, i-algae ebomvu ibaluleke kakhulu. Zizo ezigcina ikhalsiyam carbonate, yiyo loo nto ingoyena uphambili uxanduva lokwenziwa kwamatye ekorale. Xa ubona iingqaqa ezibomvu zekorale, zibizwa ngokuba yi-coralline algae.
Olu lwakhiwo lwamanzi eekorale lunokwenziwa ngombulelo kwi-calcium leyo Ifakwe kwiindonga ze-algae ngohlobo lwe-calcium carbonate.
Ngokumalunga nokubaluleka kwezoqoqosho kwezi algae, siyayibona indlela ekukunye kokutya okubaluleke kakhulu kwizizukulwana ezizayo, ngenxa yeprotein yazo ephezulu kunye nomxholo wezondlo.
Kwindawo yemizi-mveliso, i-algae ebomvu isetyenziswa njengeyona nto iphambili yokwenza laxatives, ukujiya kwesuphu, i-ayisikhrim, iijeli kunye nezinye iidizethi. Zingasetyenziswa njengesicacisi kwimveliso yeebhiya kunye neemveliso zobisi.
I-algae ebomvu inezempilo kunye neempawu zokuthambisa. Siza kuhlalutya ezinye zazo.
I-Seaweed inenani elikhulu lezondlo, iiprotheni, i-fiber kunye neevithamini. Ngale ndlela, ziye zaba kukutya okuphezulu, zombini amaxabiso ezondlo kunye nevithamin K kunye necalcium. Kwamanye amazwe afana neJapan, ukulinywa kwe-algae ebomvu njenge-nori kugqibezela ubuchule bayo ukubenza bakhule ngokukhawuleza.
Iziphumo ezichaseneyo ne-antioxidant, iodine kunye noxinzelelo lwegazi
Ngokufumana ukuxinana okuphezulu kweekhompawundi, iivithamini kunye neeminerals, zinefuthe elikhulu lokukhusela umzimba wethu kwii-radicals zasimahla. Ziyi-antiviral enamandla, ngakumbi i-carrageenan eyimfihlo. Iyakwazi ukomeleza amajoni ethu omzimba kwaye sizikhusele kwizifo ezibangelwa ziintsholongwane kunye neentsholongwane.
Into elungileyo malunga nala algae kukuba ayinalo naluphi na uhlobo lomlutha, isiphumo esibi njengezinye iintlobo zamachiza.
Banesiphumo se-iodine kwaye ke ngoko ziyasebenza kunyango lwe-goiter. Banenani elikhulu le-iodine kwaye babuyisela imisebenzi ye-thyroid. Kule meko kungcono ukuba sinikele ingqalelo kugqirha wethu.
Kufuneka ikhunjulwe into yokuba ukuba le minerali inyuka kakhulu emzimbeni wethu, sinokuthi senze into echaseneyo nale ifunwayo size senze mandundu iingxaki zempilo esinazo. Kungcono ukubonisana nogqirha ukuze sikwazi ukunyanga i-algae ebomvu ngokuxinana ngokwaneleyo kwe-iodine emzimbeni wethu.
Kulungile kakhulu kubantu abaneengxaki ezinxulumene noxinzelelo lwegazi. Kucetyiswa kakhulu ukuba uthathe izongezo ngokubhekisele kubomvu obomvu. Olunye uphononongo lubonakalisile ukuba banefuthe le-enzyme enoxanduva lokunyusa uxinzelelo lwegazi. Oku kuthetha ukuba ngokuthatha iifomsile ezibomvu ze-algae singakwazi ukulawula uxinzelelo.
Iziphumo zekhalsiyam kunye nevithamin K
I-calcium ibalulekile kunyango lwe-osteoporosis. I-calcium yemihla ngemihla engama-900 eemiligram eziyimfuneko ngosuku ukuphinda umile amathambo ethu. Kuba i-algae ebomvu inomxholo ophezulu wale minerali, iyasebenza ukubonelela ngesixa se calcium.
Ukunyanzelwa kwecalcium kunokuwonakalisa umzimba. Ukuphazamiseka kokugaya okufana nerhasi, ukudumba okanye ukuqhina kunokubangelwa kukutya kakhulu i-calcium. Ukuba isetyenziswe ngaphezulu kunokubangela ukwenziwa kwamatye ezintso.
Vitamin K kuluncedo kakhulu ekuphuculeni ukopha nokopha. Phakathi kweepropathi kukudala amahlwili amise ezi ntlobo zobunzima. Ngokuchasene noku, i-vitamin K engaphezulu kunokuba yingozi kubantu abaneengxaki zentliziyo kwaye bathambekele kwintliziyo okanye ekubethweni.
Ukusetyenziswa okucetyiswayo kwemihla ngemihla yi-80 mcg, kwabo bangenazo ezi ngxaki zichazwe ngasentla. Njengoko besoloko besitsho, yonke into ibhetele ekugxininiseni kakuhle, kuba yile dosi eyenza ityhefu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nobomvu obomvu kunye nazo zonke iipropathi kunye nezibonelelo ezinazo ebantwini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ubomvu obomvu
UJaime Burgos sitsho
Ukugqwesa, ulwazi olulunge kakhulu kolu hlobo lwezityalo ze-tolophytic; Siza kulinda amanqaku afanayo kwii-chrysophytes kunye neepeophytes.
Phendula kuJaime Burgos